Jubaland:Goob dhuxusha laga jaro oo ku taal Jubada Hoose oo Alshabaab dad ku laayeen? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jubaland:Goob dhuxusha laga jaro oo ku taal Jubada Hoose oo Alshabaab dad ku laayeen?
19th March 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Wararka ka imaanaya Deegaanka Buurgaabo ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in dagaalyaano hubeesan oo katirsan Xarakada Al-Shabaab ay rasaas ku fureen dad ku sugnaa goob la sheegay in Dhuxul lagu shidayay.
Inta la xaqiijiyay sadax qof qof ayaa ku dhimatay rasaastaasi ay fureen dagaalyahanada katirsan Al-Shabaab waxaa sidoo kale ku dhaawacmay lix qof oo kale oo qaarkood lasoo sheegayo in ay qabaan dhaawacyo culus.
Goobgooge ku sugan Deegaanka Buurgaabo oo qiyaastii 240KM koonfur galbeed ka xigta magaalada Kismaayo ayaa sheegay in Kooxda Al-Shabaab ee halkaasi ku sugan ay horey usoo saareen amar ah in aan dhirta la jari karin ayna mamnuuc tahay in dhuxul la shido.
Dekedda magaalada Kismaayo ayaa lagu soo waramaaa in si sharci daro ah looga dhoofiyo dhuxusha xili horey loo mamnuucay in dhuxusha la dhoofiyo, waana mida keentay in dhir badan laga jaro Dhulka geedaha badan ee Jubada Hoose.